မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: To be with My Mr.Right (1)
I'm waiting part 2~~ cheers
1/22/2015 5:01 PM
မဗေဒါပဲ အရေးကောင်းလို့လားမသိ။ ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ ကိုယ်သာဆိုရင် အဲ့လိုကောင်းအောင် ရေးတတ်မှာမဟုတ်။ :P
1/22/2015 5:52 PM
အိုင်းးးးးစ် နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲ ဆက်ပြောပြလို့ တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေဘီ စိတ်ဝင်တွေစားနေတယ်နော် ဟွင်းးး
1/22/2015 8:14 PM
is that your personal account?
or just another novel?
1/22/2015 11:13 PM
It is opened for your imagination -m. It is either novel or personal. :D . thanks for your interest.
ရေးပါ့မယ်... ဒါပေမဲ့ နောက်အပတ် မြန်မာပြည် ခဏပြန်အုံးမှာ... :(
အရမ်းတန်းလန်းကြီးတော့ မဖြစ်ပါဘူး... တစ်ခန်းရပ် ပေါ့... :D
ဆက်လက် ကြိုးစားပါမည်... :)
Everyone is the lead of their love story. You should write your love story with "U Lay Gyi"... it must beagood one.
1/22/2015 11:31 PM
သယ်ရင်းကြီး မြန်ချက်... ငါ့ဘလော့ မဖတ်တော့ဘူးတောင် ထင်တာ...
1/22/2015 11:32 PM
1/23/2015 10:55 AM
အင့် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့.. အပိုင်း(၂)မျှော် :)
P.S. commentမချန်ဘူးပြောပြောနေလို့ ကြိုးစားပန်းစားချန်ခဲ့ပါတယ်
အရေးအသားလေးကမိုက်လိုက်တာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေး။ ဇာတ်လမ်းလေးက ချစ်ဖို့ကောင်း။ ပြုံးစိစိနဲ့ ဖတ်နေတာသာကြည့်။ ဒုတိယပိုင်းမြန်မြန်လာပါ။
မမဗေဒါရေ အပိုင်း ၂ ကို မျှော်နေမယ်နော် :)
1/23/2015 4:19 PM
ဒုတိယပိုင်း မြန်မြန် ပါးလီပါးလီ
1/23/2015 4:56 PM